Nasteexo Indho oo laga diiday in ee show ku qabato Magaalada Hargeysa iyo Wasiirka Diinta Wasiirka Diinta Iyo Awqaafta Somaliland oo ka hadlay . | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Nasteexo Indho oo laga diiday in ee show ku qabato Magaalada Hargeysa iyo Wasiirka Diinta Wasiirka Diinta Iyo Awqaafta Somaliland oo ka hadlay .
Nasteexo Indho oo laga diiday in ee show ku qabato Magaalada Hargeysa iyo Wasiirka Diinta Wasiirka Diinta Iyo Awqaafta Somaliland oo ka hadlay .
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 15-08-16 7:59 AM Fanaanada Nasteexo Indho, ayaa lagu soo waramayaa in loo diiday ama laga hor istaagay Showgii ay dooneysay ineey ku qabato magaalada Hargeysa ee xaruunta dowladda isku sheego Somaliland.
Dad u dhow Gabadhaani iyo asxaabta la socoto ayaa Somaalistars.net u xaqiijiyay in loo diiday ineey show ku qabato magaalada Hargeysa Wasiirka Diinta Iyo Awqaafta is maamulka Somaliland ayaa ka hadlay sababtii loogu diiday in Nasteexo Indho Ku Qabato Hargeysa Show .
Nasteexo Indho waxaa ee horay show ugu soo qabatay qeybo kamid ah dalka soomaaliya iyada oo ee Wadaadada Magalaaada Garowe Ka dideyn in ee Show Ku Qabato Magalaada Garowe ee Caasimada Maamulka Puntland sababo la xiriirto xaga dhaqanka .
Hoos Ka Daawo Hadaldii Wasiirka Diinta